वि.सं. २०७७ कार्तिक १९ गते/ हेर्नुहोस् आजको आफ्नो राशिफल – Enepali Samchar
वि.सं. २०७७ कार्तिक १९ गते/ हेर्नुहोस् आजको आफ्नो राशिफल
November 4, 2020 adminLeaveaComment on वि.सं. २०७७ कार्तिक १९ गते/ हेर्नुहोस् आजको आफ्नो राशिफल
बोनयाँ काम सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छैन। आर्थिक आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। तपाईंको मधुर वाणीको कारण अरु मानिस प्रभावित हुनेछन्। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा समय अत्यन्त शुभ रहने देखिन्छ।
तपाईं शारीरिक र मानसिक रूपले उत्साहित महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंको रचनात्मक र कलात्मक शक्तिहरू बढ्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। मध्यान्हपछि भने तपाईंको मानसिक व्यवहार द्विपक्षीय रहनेछ। महत्वपूर्ण निर्णय लिनको लागि समय शुभ छैन।
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। परिवारमा पनि मतभेद हुनसक्छ। मध्यान्हपछि परिस्थिति अनुकूल हुनेछन्। पारिवारिक वातावरण पनि परिवर्तन हुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। कार्य सम्पन्न गर्ने उत्साह पनि बढ्नेछ।
परिवार र व्यवसायको क्षेत्रमा लाभदायक दिन रहनेछ। स्त्री वर्गबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ। प्रिय व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। मध्यान्हपछि परिस्थिति केहि प्रतिकूल हुनसक्छ। पारिवारिक वातावरण बिगार्न सक्छ। खर्चको मात्रा बढ्नेछ।
व्यापार तथा व्यवसायिक व्यक्तिको लागि दिन लाभदायक रहनेछ। व्यापार बढ्नेछ। परिवार र साथीहरूसँग आनन्दमय समय बित्नेछ। महिला वर्गबाट लाभ हुने सम्भावना पनि छ। वैवाहिक जीवन सुखमय रहनेछ। रमणीय यात्राको योग रहेको छ। सन्तानबाट पनि लाभ मिल्नसक्छ।
नयाँ काम सुरू गर्नका लागि समय अनुकूल छ। कार्यक्षेत्र तथा व्यवसायमा कार्यभार बढ्नेछ। अधुरा रहेका कार्य सरलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारमा वृद्धि हुने सम्भावनाहरु छन्। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान बढ्नेछ। परिवारमा सुखमय वातावरण रहनेछ।
खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छैन। शारीरिक तथा मानिसक थकानको महसुस हुनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। व्यवसाय क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्नेछ। मध्यान्हपछि नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुनेछ।
दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। परिवारका सदस्यहरूको साथ सामाजिक समारोहमा उपस्थित हुने मौका मिल्नेछ। यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। मध्यान्हपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ। नयाँ कार्य सुरु नगर्नुहोला। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला।
शारीरिक तथा मानसिक रूपले तपाईं अस्वस्थ रहनुहुनेछ। आर्थिक गतिविधिहरू पनि राम्रोसँग आयोजना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको भरपूर साथ सहायोन मिल्नेछ। व्यापारीहरूले व्यापारमा मनग्य लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। वैवाहिक जीवनमा सुमधुरता छाउनेछ।
बोलीको मिठासले नयाँ सम्बन्धहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। आर्थिक योजना राम्रोसंग गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्यमा भने ध्यान दिनुहोला। मध्यान्हपछि भने स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ सहयोग प्राप्त गर्नु हुनेछ। अधुरा कार्य पूरा हुनेछन्।
पैतृक सम्पत्तीबाट फाइदा हुनेछ। सवारीसाधन, घर-जग्गा सम्बन्धि कार्य गर्दा होशियारीका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईंको वैचारिक समृद्धि बढ्नेछ। तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। अधिक परिश्रम पश्चात पनि उपलब्धि कम हुनेछ। परिवारका सदस्यसँग मदभेद हुनसक्छ।
तपाईं कुनै पनि काम उच्च मनोबल तथा आत्मविश्वासका साथ गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। पितृपक्षबाट लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। अत्याधिक खर्च हुनाले आर्थिक स्थिति कमजोर हुनसक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुभ रहनेछ।
नेकपा फुटाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने यस्तो छ भित्री तयारी
झन्डै पाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला बेवास्ता नगर्नुहोला पढेर ॐ लेखि शेयर गर्नुहोस्
बैशाख २१ देखि मध्य भोटेकोशीले आईपिओ निष्काशन गर्ने, क-कसले दिन पाउँछ आवेदन ? पूरा हेर्नुहोस्